Ny herin'ny angon-drakitra: ny fomba fampiasan'ny fikambanana mpitarika ny angona ho tombony amin'ny fifaninanana | Martech Zone
Talata, Novambra 16, 2021 Talata, Novambra 16, 2021 Zara Ziad
Ny angon-drakitra no loharanon'ny tombony amin'ny fifaninanana ankehitriny sy ho avy.
Borja Gonzáles del Regueral – Dekan Lefitra, Sekolin'ny Siansa sy Teknolojian'ny Olombelona ao amin'ny IE University
Ny mpitarika orinasa dia mahatakatra tanteraka ny maha-zava-dehibe ny angon-drakitra ho fitaovana fototra amin'ny fitomboan'ny orinasany. Na dia maro aza no mahatsapa ny maha-zava-dehibe azy io, ny ankamaroan'izy ireo dia mbola sahirana amin'ny fahazoana azy Ahoana no azo ampiasaina izy io mba hahazoana vokatra tsara kokoa amin'ny fandraharahana, toy ny famadihana ireo vinavina kokoa ho mpanjifa, fanatsarana ny lazan'ny marika, na ny fahazoana mifaninana amin'ny indostria amin'ny mpilalao hafa.
Ny fifaninanana indostrialy dia azo avy amin'ny anton-javatra maro. Saingy tsikaritra fa ny ankamaroan'ireo lafin-javatra ireo dia azo fehezina sy amboarina amin'ny alàlan'ny fanangonana sy fanadihadiana. Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia hianatra ireo lafin-javatra izay misy fiantraikany amin'ny lafiny mifaninana amin'ny orinasa iray eo amin'ny indostria, ary ny fomba ahafahan'ny angon-drakitra momba ny fandaminana manampy amin'ny fanatsarana ny fifaninanana.
Mifaninana tsara kokoa amin'ny Data Initiatives
Amin'izao vanim-potoana izao, ny mpanjifa dia manana lisitra lava be azo isafidianana rehefa mitady vokatra na serivisy. Ny fanangonana angon-drakitra sy ny famakafakana dia afaka manampy betsaka ny fikambanana iray hametraka ny tenany ho mpilalao manavaka ny tsena.
Andeha hojerentsika ireo lafin-javatra telo lehibe indrindra izay misy fiantraikany amin'ny safidin'ny mpanjifa ary mifantoka amin'ny fomba hanamafisana ny mahasarika ny marika amin'ny mpifaninana hafa eny an-tsena ny fanangonana sy famakafakana.
Antony 1: Mahafeno ny filan'ny tsena ny tolotra vokatra
Ny endri-javatra sy ny toetra mampiavaka ny vokatra iray dia mampiavaka azy amin'ny fifaninanana. Raha mivarotra vokatra mitovy amin'ny mpifaninana ianao, tsy misy sanda miavaka fanampiny, dia misy ny vintana mety hisarihana mpanjifa bebe kokoa amin'ny tolotra miampy sanda ny mpifaninana aminao. Ny faminaniany ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny fahatakarana ny zavatra takiany dia dingana iray manan-danja hahazoana tombony amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena.
Data initiative to maminavina ny fihetsiky ny mpanjifa
Misy lamina iray ao ambadiky ny zavatra vidian'ny mpanjifa eny an-tsena sy ny endri-javatra tadiaviny rehefa mandray fanapahan-kevitra hividy. Azonao atao ny mamakafaka ny angona momba ny tsena mba hahatakaranao:
Iza amin'ireo endri-javatra amin'ny vokatra no mahasarika kokoa ny mpanjifa?
Inona no ilain'ny mpanjifa amin'ny fividianany?
Inona avy ireo vokatra iraisan'ny mpanjifa matetika?
Antony 2: Vina stratejika mifaninana
Zava-dehibe ny mahafantatra tsara ny fifaninanana sy ny hetsika stratejika ataony mba hahafahanao mampifanaraka ny fanapahan-kevitrao. Na fampiroboroboana, fihenam-bidy, na faharanitan-tsaina momba ny vidin-javatra, dia zava-dehibe ny manatsoaka hevitra avy amin'ny angon-drakitra taloha, fa tsy manaraka ny tsinay.
Data initiative ho an'ny fandraisana fanapahan-kevitra mifaninana
Ny analytics data dia afaka manampy anao hahatakatra tsara kokoa ny fifaninanana amin'ny lafiny:
Inona ny tetika fampiroboroboana sy fihenam-bidy atolotry ny mpifaninana hafa?
Inona avy ireo lafin-javatra miantraika amin'ny vidin'ny mpifaninana aminao?
Manao ahoana ny fahafaham-pon'ny mpanjifan'ny mpifaninana aminao amin'ny fividianany?
Antony 3: Fanatsarana ny fisian'ny vokatra sy ny fahafahana miditra
Ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia manantena ny fanaterana vokatra haingana, ary koa ny traikefa omnichannel milamina. Noho izany, ny marika dia mila miantoka fa feno sy karazana vokatra mifanaraka amin'ny takian'ny tsena ny fanangonan'izy ireo. Toy izany koa, ny fampahalalana momba ny vokatra ara-barotra amin'ny fomba marina, ary ny fahafahan'ny mpanjifa miditra sy manafatra ireo vokatra mitovy amin'ny an-tserasera sy ny fantsona ao amin'ny fivarotana dia tena zava-dehibe.
Data initiative to manatsara ny fisian'ny vokatra sy ny fahafahana miditra
Ny analytics data dia afaka manampy anao hamaly fanontaniana toy ny:
Inona ny isan-jaton'ny varotra ao amin'ny magazay raha ampitahaina amin'ny Internet?
Inona avy ireo toerana mahazatra indrindra amin'ny fanaterana vokatra?
Aiza ny mpanjifa mamaky momba ny vokatrao/serivisy ataonao?
Ny herin'i madio Data
Ho an'ireo fanontaniana rehetra nasongadina etsy ambony, azonao atao ny maminavina ny valiny amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny tsinay, na mampiasa angon-drakitra marina sy azo itokisana tamin'ny lasa ary mandray fanapahan-kevitra ho avy. Saingy somary sarotra kokoa noho izany. Ny angon-drakitra voangona sy voatahiry amin'ny fikambanana maro dia tsy amin'ny endrika marina sy marina hampiasaina amin'ny famakafakana, ary tsy maintsy iharan'ny tsingerin'ny fitantanana ny kalitaon'ny angona alohan'ny hampiasana azy noho ny antony toy izany.
Ny tsingerin'ny kalitaon'ny angon-drakitra dia mitondra ny angonao amin'ny dingana maromaro mba hiantohana ny fampiasana sy ny fahamarinan'ny angona, toy ny fampidirana angon-drakitra, ny mombamomba azy, ny fikosoham-bary, ny fanadiovana, ny fanafoanana ary ny fampifangaroana. Fitaovana kalitao momba ny angon-drakitra manokana dia nanamora ny fanaovana automatique ny fitantanana ny kalitaon'ny angona miaraka amin'ny fihenan'ny fotoana, ny vidiny ary ny fampiasam-bola. Ny fitantanana ny kalitaon'ny angona ara-potoana dia afaka manome alalana ny kajy amin'ny fotoana tena izy ireo fepetra mifaninana, toy ny fepetra takian'ny tsena, ny safidin'ny mpanjifa, ny vidiny sy ny fampiroboroboana, ary ny fahazoana vokatra, sns.
Tags: tahirin-kevitra madiotombony amin'ny fifaninananapaikady fifaninananaDataData analyticsfanadiovana datatohatra tohatradata predictionmaminavina ny fihetsiky ny mpanjifafahafahana miditra amin'ny vokatrany fisian'ny vokatrafanatitra vokatratetika
Zara Ziad dia mpanadihady momba ny varotra vokatra ao amin'ny Data tohatra manana fiaviana amin'ny IT. Mafana fo izy amin'ny famolavolana paikady momba ny votoaty mamorona izay manasongadina ny olan'ny fahadiovana angon-drakitra tena misy atrehin'ny fikambanana maro ankehitriny. Mamokatra votoaty izy mba hampitana vahaolana, toro-hevitra ary fomba fanao izay afaka manampy ny orinasa hampihatra sy hahatratra ny kalitaon'ny angon-drakitra ao anatin'ny fizotran'ny fitsikilovana orinasa. Miezaka mamorona votoaty mikendry mpihaino marobe izy, manomboka amin'ny mpiasa ara-teknika ka hatramin'ny mpampiasa farany, ary koa ny fivarotana azy amin'ny sehatra nomerika isan-karazany.
WP All Import: Ahoana ny fomba fanafarana betsaka ny hetra amin'ny sokajy ho ao amin'ny WordPress avy amin'ny CSV